Baaskiil ＆ Baaskiil & Mooto
Batariga keydinta tamarta
Solar system Nidaamka dabaysha
Nidaamka keydinta tamarta guriga
UPS (Quwadda korontada aan la joojin karin)
Nidaamka kormeerka ee internetka
Koronto la qaadan karo
Toban sano gudahood, lithium iron fosfate ayaa beddeli doona lithium manganese cobalt oxide oo ah kiimikada ugu weyn ee keydinta tamarta taagan?
Hordhac: Warbixin ay soo saartay Wood Mackenzie waxay saadaalisay in toban sano gudahood, lithium iron fosfate ay beddeli doonto lithium manganese cobalt oxide oo ah kiimikada keydka tamarta taagan. Tesla ...
Maxay ugu maleyneysaa LiFePO4 noqon doonaa kiimikada ugu muhiimsan mustaqbalka?
Hordhac: Catherine von Berg, oo ah agaasimaha shirkadda batroolka ee California, ayaa ka hadashay sababta ay ugu maleyneyso in lithium iron phosphate uu noqon doono kiimikada ugu muhiimsan mustaqbalka. Falanqeeyaha Mareykanka Wood Mackenzie ayaa qiyaasey usbuucii la soo dhaafey in sannadka 2030-ka, birta lithium phos ...
Batariga fosfooska birta ah
Gelitaanka Julaay 2020, bateriga CATL lithium iron phosphate wuxuu bilaabay inuu keeno Tesla; isla mar ahaantaana, BYD Han ayaa lagu taxay, oo batteriga waxaa lagu qalabeeyay lithium iron phosphate; xitaa GOTION SARE-TECH, tiro badan oo taageerta Wuling Hongguang oo dhowaan la isticmaalay waa al ...
LIAO Awood Gaar u Leh Mover LiFePO4 batari-LAF12V30Ah la siiyay
Dhawaan, waxaan maqalnay war farxad leh oo ka socda Yurub oo kumanaan mayl u jira. Tartanka waxqabadka batari dhaqaajinta ee ay qabato ANWB (Dutch Bicycle Master Association), LIAO Enginely Power Mover LiFePO4 batari-LAF12V30Ah oo ay soo saartay shirkadeena ayaa garaacday dhamaan 12 tartame ...
Dadaallada la muujiyey ayaa ka guuleystey Dhibaatada Faafa
Cudurka faafa ee loo yaqaan 'COVID-19' wuxuu faafiyey cinwaano caalami ah. Sida shirkadaha badankood ee Shiinaha, waxaan la kulannaa caqabado aad u weyn xagga socodsiinta khadadka wax soo saarkeenna iyo keenista wax soo saarkeenna. Xarunta dhexe ee ganacsiga caalamiga ah, LIAO Technology waxay kobcisaa iskaashiga ganacsiga ee shirkadda ...
Xafladda furitaanka iskaashiga jaamacadda iyo shirkadaha
Munaasabadda saxiixa ee iskaashiga jaamacadda-ganacsiga iyo saldhig barashada dhaqanka u dhexeeya machadka qalabka sayniska iyo injineernimada, jaamacadda zhejiang iyo shirkadda, ayaa lagu qabtay furitaanka weyn ee shirkadda. Waa tallaabo weyn in la furo bog cusub oo ah ...
No.15 Yangcheng Wadada, Pingyao, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, 311115, Shiinaha
Weydiimaha ku saabsan alaabtayada ama xalka loo habeeyay, fadlan noo dhaaf emaylkaaga waxaanan la xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.